တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် ကန္တာရမှ အိုအေစစ် အသွင်ပြောင်းလဲ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း နင်းရှ (ဟွေ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ Lingwu မြို့ရှိ Baijitan အမျိုးသားဂေဟဗေဒကြိုးဝိုင်းအား ဇွန် ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရင်ချွမ်း ၊ ဇွန် ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
သဲထိန်းချုပ်ကာရံရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၌ နှစ်မြုပ်ထားသော မျိုးဆက်သုံးဆက်ကြောင့်ပင် ကျယ်ပြောလှေသာ Maowusu ကန္တာရ၏ အနောက်တောင်ဘက်စွန်း Lingwu မြို့ရှိ Baijitan အမျိုးသားဂေဟဗေဒကြိုးဝိုင်းတွင် ဟက်တာပေါင်း ၄၂,၀၀၀ ကျယ်ဝန်းသော အိုအေစစ်လေးတစ်ခု ဖန်တီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ယခုအခါ ယင်းအိုအေစစ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ ဂေဟဗေဒစနစ်အတွက် အရေးပါသော အကာအကွယ် အတားအဆီးတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း နင်းရှ (ဟွေ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ Lingwu မြို့ရှိ Baijitan အမျိုးသားဂေဟဗေဒကြိုးဝိုင်းတွင် ပလပ်စတစ် ဖန်လုံအိမ်များအား ဇွန် ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း နင်းရှ (ဟွေ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ Lingwu မြို့ရှိ Baijitan အမျိုးသားဂေဟဗေဒကြိုးဝိုင်းတွင် သဲများကို ထိ်န်းချုပ်ကာရံရေး အလုပ်သမားများက ကောက်ရိုးကျားကွက်ပုံ အတားအဆီးများ ပြုလုပ်နေသည်ကို ဇွန် ၁၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း နင်းရှ (ဟွေ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ Lingwu မြို့ရှိ Baijitan အမျိုးသားဂေဟဗေဒကြိုးဝိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ၏ သဲထိနး်ချုပ်ကာရံရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ပြသထားသော ပြခန်းတစ်ခုအား ဇွန် ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း နင်းရှ (ဟွေ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ Lingwu မြို့ရှိ Baijitan အမျိုးသားဂေဟဗေဒကြိုးဝိုင်းရှိ စပျစ်ဖန်လုံအိမ်များအား ဇွန် ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း နင်းရှ (ဟွေ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ Lingwu မြို့ရှိ Baijitan အမျိုးသားဂေဟဗေဒကြိုးဝိုင်းအား ဇွန် ၁၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း နင်းရှ (ဟွေ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ Lingwu မြို့ရှိ Baijitan အမျိုးသားဂေဟဗေဒကြိုးဝိုင်းရှိ ကြက်သွန်မြိတ် ဖန်လုံအိမ်စိုက်ခင်းအား ဇွန် ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း နင်းရှ (ဟွေ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ Lingwu မြို့ရှိ Baijitan အမျိုးသားဂေဟဗေဒကြိုးဝိုင်းရှိ ပလတ်စတစ်ဖန်လုံအိမ်အတွင်း အစိမ်းရောင်ပဲသီးများ ခူးဆွတ်နေသည်ကို ဇွန် ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း နင်းရှ (ဟွေ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ Lingwu မြို့ရှိ Baijitan အမျိုးသားဂေဟဗေဒကြိုးဝိုင်းအား ဇွန် ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကန္တာရကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဒေသခံများသည် ကန္တာရအား လယ်ယာမြေအဖြစ်သို့ အသွင်ပြောင်းလဲကာ ဈေးကွက်တွင် ရောင်းချနိုင်သော
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အကျိုးအမြတ်ရှိသော စိုက်ပျိုးရေလုပ်ငန်း၌ နှစ်မြှုပ်ထားလျက်ရှိသည်။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဂေဟစနစ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ဒေသခံများ၏ ဝင်ငွေမြှင့်တင်ရန် ဖော်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။ (Xinhua)
Desert turns into oasis in NW China
YINCHUAN, June 17 (Xinhua) — Thanks to three generations of dedicated sand control efforts,a42,000-hectare oasis has been created in the Baijitan national ecological reserve of Lingwu on the southwest edge of the vast Maowusu Desert. The oasis has now become an important protective barrier for the ecological system in northwestern China.
In order to effectively control the desert, locals have dedicated themselves to developing profitable agriculture by transforming the desert into farmland and planting vegetables and fruits which could be sold in the market. Aquaculture and eco-tourism have also been developed to boost locals’ income.
Photo 1 : Aerial photo taken on June 15, 2022 showsaview of Baijitan national ecological reserve of Lingwu, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
Photo2: Aerial photo taken on June 14, 2022 shows plastic greenhouses in the Baijitan national ecological reserve of Lingwu, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
Photo3: In this aerial photo, sand control workers make straw checkerboard barriers in the Baijitan national ecological reserve of Lingwu, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region, June 16, 2022. (Xinhua/Yang Zhisen)
Photo4: Aerial photo taken on June 15, 2022 showsaview of an exhibition hall showcasing China’s sand control efforts in the Baijitan national ecological reserve of Lingwu, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
Photo5: Aerial photo taken on June 15, 2022 showsaview of Baijitan national ecological reserve of Lingwu, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
Photo6: Aerial photo taken on June 14, 2022 shows grape greenhouses in the Baijitan national ecological reserve of Lingwu, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
Photo7: Aerial photo taken on June 16, 2022 showsaview of Baijitan national ecological reserve of Lingwu, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
Photo 8 : Aerial photo taken on June 14, 2022 showsaview of Baijitan national ecological reserve of Lingwu, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
Photo9: Aerial photo taken on June 14, 2022 shows leek greenhouses in the Baijitan national ecological reserve of Lingwu, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
Photo 10 : Workers pick green beans inaplastic greenhouse in the Baijitan national ecological reserve of Lingwu, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region, June 14, 2022. (Xinhua/Yang Zhisen)
Photo 11 : Aerial photo taken on June 14, 2022 showsaview of Baijitan national ecological reserve of Lingwu, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
Photo 12 : Aerial photo taken on June 16, 2022 showsaview of Baijitan national ecological reserve of Lingwu, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)■
တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖိန် ၂၅ ကြိမ်မြောက်စိန့်ပီတာစဘာ့ခ် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်၌ မိန့်ခွန်းပြောကြား